Ny Foko dia misokatra tanteraka | Fondation des Choisis de Jésus
Ny Foko dia misokatra tanteraka
1B_07: Anaka, ny Foko dia misokatra tanteraka mba handray anao. Tsy miandry afa-tsy ireo « ENY » avy aminao Aho. Manaike ianao fenoina ; manaike ianao tiavina, manaike ianao valiana soa, manaike ianao kolokoloina, manaike ianao ho doroin’ny Afon’ny Fitiavako ! Tiako loatra ianao. Tsy misy fetrany ny Fitiavako !